Siyaasa maatii qabsaa’otaa dararuu, toftaa hamaa mootummaan jalqabe – Awash Times
Siyaasa maatii qabsaa’otaa dararuu, toftaa hamaa mootummaan jalqabe
December 27, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Eenyumtuu fira qaba. Firri nama tokkoo yookan yakka mootummaan hojjetu kana mormaa jira yookanimmoo mootummaadhaf ergamee ummata dararaa jira. Gaafa gocha nama tokkootif maatin dararamuu jalqabe hunda biraa gahuuf deema.
Akkuma odeeffannoon Oromiyaa kutaalee gara garaa irraa dhagahamaa jiru mootummaan karaa Dabbaloota fi milishaa akkasumas foolisii maatii namoota mootummaa mormanii irratti miidhaa ajjeechadhaa hamma hidhaaf dararaa geessisaa jira.
Miidhan kunillee kan dhaqqabaa jiru ilmi, intalli, abbaan, haati, ykn obbolaan keessan biyya keessatti mootummaa dura dhaabatan, lolaa jiran, mormaa jiran ykn biyya alaa taa’anii karaa TV fi Facebook akkasumas midiyaa gara garaa mootummaa mormaa jiran sababa jedhuuni.
Akkuma seera addunyaa iddoo kamuu namni yoma yakkallee hojjete abbaatu itti gaafatama malee maatin isaa yakka ilmaatif kan itti gaafatamu seera waggoota dhibbaa as hinjiru. Seerri waan ilmi ykn intalli mootummaa mormaniif itti gaafatamu bara 1930 keessa, bara Istaliin biyya bulchu Rusiyaa keessatti maatii keessaa namni yoo mootummaa morme «fira diinaa» jechuudhan maatin isaa hinadabama ture. Chaayinaa keessattis bara Maa’oon biyya san dursaa ture sababa namni maatii keessaa mootummaa mormeef maatin isaa adabamaa ture. Biyya Jarman keessatti bara Naazii maatin nama mootummaa mormee adabamaa ture.
Egaa biyyi Tophiyaa akka bara Staalin, akka bara Maa’oo yookan akka Naazii Jarmaniitti bulaa jirtii?
Toftaan maatii nama mootummaa mormee miidhuu kuni waan afur of keessaa qaba:
Namni maatii kiyyattu miidhama jedhee mootummaa mormuu akka dhiisufi
Maatin akka ilmaan ofii irratti dhiibbaa godhee qabsoo keessaa baasufi
Dabballoota fi ummata walitti diina gochuu bira darbee akka gara ummanni walfixuu jijjiiramuufi.
walumaagalatti ummanni sodaatee akka qabsoo dhiisufi.
Keessattuu ummata walficcisiisuudhaan gara gosaan walfixuu akka cehu gochuuf mootummaa aangoo ofii dheereffachuufi. Dabballeen, milishaan ykn foolisiin tokko maatii nama biraa irra miidhaa fi dararaa yoo geessisu kan ofii mana Waaqaa dhoksa moo garaa keessa godhatee deema? Mana namaa yoo gubu mana kan ofii kiisii keessa godhatee deemaa?
Egaa tooftaa hamaa mootummaan ummata walficcisiisuf jalqabe kana ummanni itti dammaquu qaba. Hunda caalaa yoo sammuu qabaatan kana dammaquu qabu warra mootummaadhaf ergamaa jiru. Miseesonni Paartii Badhaadhina yakka akkanaa kana irraa yoo of qusachuu baatan abbaaf haadha ykn obbolaa nama qabsaayee tokko yoo miidhan kana isaanitis akka miidhamuu danda’u yoo mana namaa guban kan isaanitis akka gubachuuf deemu yaaduu qabu.
Ummanni dhimma kanarratti sirriitti dubbachuu qaba. Manni kiyya hara hintuqamne jedhanii callisuu osoo hintaane boru anas na dhaqqaba jedhanii dursanii yaadun hedduu barbaachisaadha. Eenyumtuu fira qaba. Firri isaa yookan yakka mootummaan hojjetu kana mormaa jira ykn mootummaadhaf ergamee ummata dararaa jira. Gaafa gocha nama tokkootif maatin dararamuu jalqabe hunda biraa gahuuf deema. Kana namuu beekee waan kuni akka dhaabatu hojjechuu qaba.
Previous Post: Ethiopia and Sudan on the verge of war